Soo dejisan WinZip 20.5 – Windows – Vessoft
Soo dejisan WinZip
WinZip – software a functional loogu talagalay in la archives shaqeeyaan. software The taageertaa qaabab archive caan ah sida ZIP, rar, TAR, GZIP, 7Z, iwm WinZip ka kooban module ah inay gurmad, beddelid files galay format PDF, soo bandhigo watermarks ka dhanka ah koobiyeynta ah aan la ogalayn. software wuu awoodaa inuu ballaariyo fursadaha ay u gaar ah oo ku xira daro kala duwan. WinZip ayaa shaqada si ay u wadaagaan files on shabakadaha bulshada caan ah.
Support of qaabab archive caan
ilaalinta Password ee archives
Badalidda files qaab PDF
Dhexgalka kaydinta daruur ah
WinZip Software la xiriira:
English, Español, Deutsch, Italiano... Eeg software more